गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग कसरी गर्ने ? (चिकित्सकको सुझावसहित) « Nagarik Khabar
गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग कसरी गर्ने ? (चिकित्सकको सुझावसहित)
प्रकाशित मिति : 16 November, 2019 1:09 pm
काठमाडौं । गर्भाधारण रोक्नका लागि गर्भनिरोधक चक्कीलाई सबैभन्दा सुरक्षित तथा सही तरिका मानिन्छ ।
तर यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चिन्ता कायमै रहने गरेको छ ।
यस्तो गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोगबाट शारीरिक असर हुने र महिलाको प्रजनन क्षमतामै असर पार्ने खालका धारणा तथा अनुभव समेत छन् । कतिपय धारणाहरु गलत रहने गरेका छन् । गर्भनिरोधक औषधिका विषयमा वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर निरा सिंह श्रेष्ठ यसो भन्छिन्ः
गर्भाधारण रोक्नका लागि विभिन्न अस्थायी तथा स्थायी साधनहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । विशेष गरेर अस्थायी रुपमा प्रयोग गरिने विभिन्न साधनहरु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने बारेमा जानकारी लिनु आवश्यक छ ।
विभिन्न गर्भ निरोधक साधनहरुको सही प्रयोग गर्न नजान्दा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्या समेत निम्तिने गर्छ ।
गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्दा पछि गर्भ नरहने समस्या समेत निम्तन सक्ने सम्भावना बढी रहन्छ । त्यसैले गर्भ निरोधक साधनको प्रयोग बारे जानकारी र यसको प्रयोगबारे प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा सारोकारवाला जोड दिन्छन् ।
गर्भनिरोधक साधनहरु प्रयोग गर्नु पूर्व उक्त व्यक्तिलाई कस्तो साधन उपयुक्त हुन्छ । यस विषयमा स्वास्थ्य सल्हाल लिएर मात्र प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छिन् वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर निरा सिंह श्रेष्ठ ।
समाजमा अझै पनि गर्भ निरोधक साधनहरुको प्रयोगबारे विभिन्न गलत धारणाहरु समेत रहेका छन् । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।
गर्भ निरोधक साधनको प्रयोग नगर्ने तर गर्भ रहे पश्चात गर्भपतन गर्नु अझ घातक हुन्छ । विभिन्न अस्थायी तथा स्थायी गर्भ निरोधक साधनको प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
व्यक्तिको उमेर, रगत समुह, स्वास्थ्य अवस्था बुझेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार उयपुक्त साधनहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सही प्रयोग नगरे…
दैनिक प्रयोग गरिने गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोगबारे धेरैलाई थाह नहुन सक्छ । अधिकांशले यौन सम्पर्कपछि स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बिना मेडिकलबाट किनेर औषधि प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसबाट गर्भनिरोध नहुन पनि सक्छ ।
पिलको प्रयोग गर्नाले महिलाको महिनावारीमा गडबडी हुन्छ । समयमा रतmस्राव नहुने, भएपछि भएको भएकै हुने लगायतका समस्याहरु देखा पर्छ ।
महिनावारी भएको दोस्रो अथवा तेस्रो दिनबाट प्रयोग गर्न सुरु गर्ने हो । पाँच दिनसम्ममा पनि प्रयोग गर्न सुरु गर्न सकिन्छ । शारीरिक सम्बन्ध नभए पनि दैनिक एउटै समयमा यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । बीचमा पिल लिन छोडे गर्भ रहन सक्छ ।
अहिले आइपिलको प्रयोग एकदमै बढेको छ । यद्यपि यो प्रभावकारी पिल होइन । आइपिलमा ३० प्रतिशत सम्म गर्भ रहने सम्भवना हुन्छ । यसले पनि महिनावारीमा समस्या ल्याउँछ । आइपिल खाने मान्छेको महिनावारी कहिल्यै समयमा हुँदैन । आइपिल प्रयोग गर्नेहरुमा ट्युवमा गएर बच्चा बस्ने समस्या बढी देखिएको छ ।
पिल आयो भने पछि गर्भ नरहने भन्ने कुरा सत्य होइन । भर्खरै विवाहित दुई वर्ष सन्तान जन्माउन नचाहाने जोडीका लागि गर्भनिरोधक चक्की महत्वपूर्ण साधन हो । गर्भनिरोधक चक्की विभिन्न स्केलमा आउँछ सामान्यदेखि अति राम्रो पनि हुन्छ । जसले समस्या कम हुन्छ ।
गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोगले शरीरको वजन बढाउने गर्दछ । नभए यो अति उत्तम साधन हो । खाने बानी नहुँदा सुरु सुरुमा वाकवाक लाग्ने खाना खान मन नलाग्ने आदि हुन सक्छ । त्यो बाहेक अन्य समस्या हुँदैन । तर कसैले लामो समय (दशौं वर्ष) प्रयोग गर्छ भने त्यसले समस्या पर्न सक्छ । गर्भ निरोधक चक्की केही वर्षको लागि मात्र सही उपाय हो । १० वर्ष भन्दा धेरै पिल्स खाएको छ भने त्यसले समस्या ल्याउँछ । त्यसैले १० वर्ष भन्दा बढी समय गर्भनिरोधक चक्की खान सुझाव दिदैँनौं ।
अर्को कतिपयलाई पिल्स खान नै नहुने समस्या हुनसक्छ । परिवारमा रगत जम्ने वा थ्रोम्बोएम्बोलिजम समस्या छ भने पिल्स नलिएको राम्रो हो । त्यसैले जुनसुकै विधि प्रयोग गरे पनि एकपटक स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ । कलेजोमा समस्या भएकाले पनि पिल्स लिनु हुँदैन ।